Cutubyada soosocda ee Agaasinka Shahaadada ee Jaamacadda Karamanoğlu Mehmetbey waa; Shaqaalaha 2547 waxaa loo shaqaaleysiin doonaa iyada oo la raacayo Xeerka Nidaamyada iyo Mabaadi'da ku Saabsan Imtixaanaadka Bartamaha iyo Imtixaannada Galitaanka ee lagu dabaqi doono magacaabista xubnaha kulliyada aan ka aheyn xubnaha kuliyadda, Sharciga Tacliinta Sare ma jiro.
Musharixiinta waxay ku dabaqi karaan waaxyada laxiriira shaqsi ahaan ama boostada ayaga oo adeegsanaya Foomka Codsiga Macallimiinta Belirtilen lar iyo dukumiintiyada hoos kuqoran ee laxiriira macluumaadka ay cadeeyaan kadib markay arjigooda qaab elektiroonig ah ugu gudbiyaan http://servis.kmu.edu.tr/basvuru/ Deegaanka, dukumiintiyada loo baahan yahay waa la aqrin karaa oo la iskaanka karaa iyadoo la raacayo sharraxaadda nidaamka arjiga internetka. Codsadayaasha soo gudbiya dukumiintiga looga baahan yahay khadka tooska ah uma baahna inay ku keenaan dukumiinti shaqsi ahaan ama boostada, haddii ay u qalmaan imtixaanka gelitaanka, waxay u gudbin doonaan nuqullada asalka ah ama la ogolaaday ee dukumiintiyada xeerbeegtida.
Taariiqda Bilaabashada Arjiga waa Taariikhda Ogeysiinta Gazette Rasmiga ah
Xilliga Kama Dambaysta Codsiga: 20 / 12 / 2019 Friday
Taariikhda Qiimaynta kahor: 25 / 12 / 2019 Tuesday
Imtixaanka gelitaanka: 27 / 12 / 2019 Friday
Taariikhda Qiimeynta Ugu Dambeysa: 31 / 12 / 2019 Tuesday
natiijooyinka www.kmu.edu.t waa lagu shaacin doonaa websaydhka.